Xayeysiinta Yelp? | Martech Zone
Sabtida, Maarso 23, 2013 Sabtida, Maarso 23, 2013 Douglas Karr
Waxaan dhawaan ka caawinaynay xafiiskayaga masseuse (haa - runti waan haysannaa midkood!) Go'aan ka gaarista haddii aan iibsanayn iyo in kale xayeysiinta Yelp waxay ahayd maalgashi wanaagsan oo lagu horumariyo iyada spa halkan Indianapolis, Khibrad Quiescence. Monique waxay horeyba u aragtay xoogaa cago cage ah joogitaankeeda Yelp, markaa malaha xayeysiinta Yelp ayaa abuuri doonta xitaa intaa in ka badan.
Markaad lahadleyso wakiilka xayeysiinta, xirmada xayeysiiska waa mid xoogan. Marka hore, Monique waxay heli doontaa xayeysiin heersare ah oo ku saabsan raadinta maxalliga ah ee Yelp ee ganacsiyada iyada oo kale ah. Yelp waligeed ma horumarin doonto ganacsi kale - iyada oo keliya - bogga natiijooyinka raadinta:
Sidoo kale, xayeysiintu waxay ku socon doontaa bogagga ganacsiga tartamayaasha:
Ugu dambeyntiina, Yelp waxay sidoo kale ku socodsiin laheyd xayeysiiska aaladaha moobaylka:
Wakiilka Yelp wuxuu qabtay shaqo aad u weyn oo nagu socodsiinaysa booskooda booska, isbarbar dhiga naftooda Yellow Pages, Lataliyaha Safarka iyo Liiska Angie (macmiilkayaga). Si loo sawiro, waxay bixiyeen shaxdan Google Trends:
Shakhsi ahaan, waxaan u maleynayay inay tani ahayd wax yar oo khiyaano ah. Jaantuskani wuxuu muujinayaa mugga raadinta dhabta ah ee loo tirinayo bogagga laftooda… maaha raadinta ereyada sida ganacsiga Monique u baahan lahaa. Hadaad sameyso in raadinta ("duugista Indianapolis"), natiijooyinka raadintu aad ayey u kala duwan yihiin - leh Liiska Angie lagu muujiyey kor Yelp iyo Yellow Pages oo leh natiijooyinka Ganacsiga Google ee xukuma bogga:
Ugu dambeyntiina, waxaan helnay qiimeynta xayeysiinta Yelp. Kharashku ma ahayn mid mamnuuc ah, xitaa waxaa ku jiray fiidiyow caado ah oo Yelp ay la soo saari lahayd macmiilka. Wakiilka ayaa nagu wargeliyay in marka fiidiyoow jiro, ay jirto beddel ka sarreeya 7%. Arrinta sicirka ayaa ahayd inay u baahan tahay qandaraas sanadle ah. Haddii Monique uusan helin natiijooyin, ciqaabta ka bixitaanka goor hore waxay ahayd 2 bilood oo lacag bixin ah marka lagu daro kharashka fiidiyaha. Si kale haddii loo dhigo, waxay ku kici kartaa Monique dhowr kun oo doolar haddii xayeysiintu aysan shaqeynayn.
Waxaan kula talinay Monique ma horay ula soco xayeysiinta… mana ahan sababta oo ah waxaan u maleynay in xayeysiinta Yelp aysan shaqeyn doonin, laakiin waa shuruud looga baahan yahay howlgalka sanadlaha ah. Soddon maalmood oo tijaabo ah ayaa fiicnaan laheyd in la tijaabiyo haddii heerka beddelka uu u wadi lahaa ganacsi cusub oo ku filan Monique si uu u buuxiyo jadwalka taariikhda. Si kastaba ha noqotee, haddii aysan ahayn, shuruudaha qandaraaska sanadlaha ah ayaa burburin kara ganacsigeeda cusub - markay u baahan tahay dakhliga ugu badan.
Ma isticmaashay Xayeysiinta Yelp? Maxay ahayd khibradaadu?
Tags: Liiska Angieraadinta maxalliga ahxayeysiiska raadinta deegaankaxayeysiinta raadinta maxaliga ahReviewsYelpdib u eegista
Qiimaha qiimaha sidan oo kale ah ee loogu talagalay xayeysiinta ayaa ka dhigi doonta ganacsi kasta oo cusub.
25, 2017 at 8: 29 PM
Waxaan dhawaan isdiiwaangaliyay xayeysiisyada yelp waxayna igu soo wici doonaan si isdaba joog ah kadib markii aan u sheegay inaanan sameyn karin oo aanan waligey helin wax shaqo ah isla markaana bisha ugu horeysa la iga qaado 300 + doolar oo farabadan oo gujin iyo waligood ma helin macaamiil macaamiil ah oo yelp ah oo loogu yeero xitaa inay helaan qiimo markii aan joojiyay xayeysiisyada yelp waxay igu soo dallaceen 24 $ adeegyada yelp waxayna u maleynayaan inay bilaash yihiin ganacsiga yelp waa khiyaano Waxaan soo nooleyn lahaa wicitaan dheeri ah markaan sii daayo oo bilaash ah ka dib markii aan bixiyay bishii ugu horreysay oo aanan ku saxeexin macaamilkan inay ku socdaan waxay kaliya ka qaateen koontadayda iyada oo la ii ogeysiinayo inay kaararkayga qaateen.
Ogaanshaha inta aan la halgamayay wali way sii socdeen oo sidan ayay sameeyeen
Haddii ay tahay inaad dadka ka dhigto inay saxeexaan sannad, markaa kalsooni yar ayaad ku qabtaa waxaad iibinayso. Taas kuma aanan taaban doonin tiirar toban cagood ah.
Jul 5, 2013 markay tahay 10:52 PM
Yelp waxay ii sheegtay inay uguyaraan tahay qandaraas laba sano ah @ 450 / bishii
Agoosto 27, 2013 saacaddu markay ahayd 2:58 PM
Mahadsanid Jim Hart. Wixii aad dhahday aad bey u khuseeyeen oo inta kale ee faallooyinka ah iyo boostada, waxay u badan tahay inaanan la xayaysiin. Waxay sidoo kale ka shaandheeyeen dib u eegista macaamiishayda ugu daacadsan. Anigu waxaan ahay acupuncturist wax yarna waan ka ogahay arrimaha ganacsiga, sidaa darteed waxaan ku tiirsannahay cilmi baaris si ay iiga caawiso inaan gaaro go'aanadeyda. Adigu waa sax. Haddii ay kalsooni ku qabeen waxa ay bixinayeen, waxay kuu oggolaan lahaayeen inaad tijaabiso muddo bil ah. Mar labaad waad mahadsantahay, Tracy Sturdivant
post weyn Doug. Waxaan si aad ah ugu eegay shirkadda Yelp macaamiisha waxaanan si cad ula hadlay wakiilkeenna oo ku saabsan shuruudaha sannadlaha ah iyo inta uu le'eg yahay dilaaga heshiisku. Waxaan tuhunsanahay inaan arki doono xulashooyinka kale dhowaan, gaar ahaan qoraallada sidan oo kale ah.
Raacday hoggaamintaada Google; marka laga reebo cuntada iyo cabitaanka Yelp si dhib yar ayaa loo diiwaangeliyaa in kasta oo Bogagga Jaallaha ahi ay sii wadaan hoos udhaca ay ku hayaan dhammaan qaybaha sidoo kale. Waxay umuuqataa inay xoojineyso booska Doug maadaama Yelp ay si dhib yar uga diiwaangashan tahay qeybta caafimaadka iyo dib u eegistooda ayaa muujineysa saadaalinta Yuppies inay tahay tirakoobkooda keliya.
Waxaan ka maqlay dhowr shirkado ganacsi oo yaryar oo ka cabanaya Yelp oo si xoog leh u hubeynaya. Wakiilka iibka ayaa ku soo wacaya wuxuuna ku siinayaa garoonka haddii aad diido inaad iska diiwaangeliso xayeysiinta sanadlaha ah, waxaad ogaan doontaa in qiimeyntaada 5-ta xiddig aysan ka muuqan boggooda guriga mar dambe. Waa la sifeeyaa ama salka hoose. Tani waxay ku dhacday ugu yaraan 6 meherado yaryar (badanaa 1-3 qof) lixdii bilood ee la soo dhaafay. Oo waxaan eegay boggaga waxyar (mid aan ku qoray oo aanan ka heli karin dib u eegista 6-ta xiddigood) waxna waxay umuuqdaan hinkey xagga hore.
Jul 5, 2013 markay tahay 10:50 PM
Run, taasi waa sida saxda ah ee ay igu sameeyeen.
T loogu talagalay 2
Jul 11, 2013 markay tahay 6:58 PM
Waxaan go aansaday inaan saxeexo mudo 6 bilood ah aniga oo bixinaya 1 bilood oo lacag bixin ah. Run ahaantii kuwa lagu daray waxay keeneen laba weydiimo oo keliya 3 bilood gudahood. Waxay yiraahdaan waxaa jira saameyn baraf ah oo leh xayeysiis aad aragto natiijooyin badan waqtiga. Taas ayaa kaliya iga dhigeysa inaan ka fikiro inay jiraan xoogaa matrix ah oo muujinaya xayeysiiskaaga waqtiyada ugu fiican tusaale ahaan markii aad halkaa ku sii dheeraatay. Waxaan u maleynayaa inaan cuni doono khidmadda dilka oo lacagteyda aan uga tagay suuq geyn toos ah. Waxay horey u shaandheeyeen qaar ka mid ah dib u eegista ugu habboon! Waa hagaag.
Oktoobar 11, 2013 at 9:37 PM
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helay maqaalkan. Waxaan si xoogan uga fiirsanayaa xayeysiinta Yelp laakiin sidoo kale waan ka cagajiidayaa inaan saxiixo 1 sano. Waxaa la i siiyay ikhtiyaar 6 bilood ah oo aan ku bixiyo lacag 1 bilood ah, laakiin ikhtiyaarka fiidiyowga waa la tirtirayaa. Yelp waxay leedahay ikhtiyaar kale oo PPC ah oo aan u baahnayn qandaraas aan xaggiisa u janjeero. Si kastaba ha noqotee, waa la ii sheegay haddii aan raaco PPC, ma iska diiwaan gelin karo xayeysiinta mar dambe wadada. Waxay iila muuqataa wax aad iila xun ..
Lacagtii ugu qasaaraha badneyd ebid ganacsigeyga. Waxaan helayaa 10 jeer oo ah taraafikada ugu badan ee boggeyga Yelp si bilaash ah oo bilaash ah ka dib riixitaanno laga soo saaray xayeysiinta la bixiyay.
Oktoobar 22, 2013 at 7:40 PM
Waxaan la hadlay Yelp Rep subaxnimadii kaliya. Waxaan ku leeyahay maalmo fasax ah Portland AMA waxaan ahay hal dumar ah oo show ah. Waxaan u maleynayay in khidmadaha 'Yelp' ay ahaayeen cirbixiyeenno iyo u baahan hal sano oo qandaraas waali ah. In kastoo aan runtii jeclaan lahaa inaan ku xayeysiiyo Yelp, hadana ma doonayo inaan bixiyo $ 350 / mo. Qiimaha iyo qandaraasyada kala geddisan ee qofwalba halkan ku dhajiyay waa sax. Midda kale ee aan weydiiyay waxay ahayd fiidiyowga. In kasta oo ay dhahaan waxay bixinayaan fiidiyaha (sax, runti waan ognahay inaan bixinayno). Haddii aad rabto inaad u isticmaasho fiidiyaha boggaaga ganacsiga, waa inaad ka iibsataa fiidiyaha sawir qaadaha. Markaa inkasta oo aan bixinayno, ma ahan inaan iska isticmaalno.
Waxaa jira ikhtiyaarka lacag-gujin-gujin, Laakiin, waa $ 200 / bil kasta. runtiina ma hubo inaad dabool saari karto.
Dabcan waxay dhahaan maadaama aad dusha sare tahay, meheradaha oo dhami way ku soo socdaan, hubaal ahaan waa la damaanad qaadayaa. Haa… maya. Hadday runti taas ka fikirayeen, markaa ma jiri lahayn baahi qandaraas sanadle ah. Waxaan doorbidi lahaa si gooni ah inaan u bixiyo fiidiyowga oo aan dejiyo miisaaniyad ii gaar ah oo bille ah markaa (haddii ay qasab tahay inaad qandaraas heshid) qandaraas 3 bilood, 6 bilood, 1 sano ah oo leh miisaaniyad ugu yar oo macquul ah
Waan ka xumahay, aniga wax xayeysiis ah oo Yelp ah ii ma ahan, hadda.
Oktoobar 23, 2013 at 6:54 PM
Waxaan la shaqeynayaa ganacsi hela ugu yaraan 8 macaamil cusub bil kasta oo kaliya laga soo bilaabo yelp. Dhammaan waxay kuxirantahay!
Laakiin sidee baad u hubin kartaa in 8 macaamiisha cusubi ay ka imaanayaan xayeysiinta lacagta lagu bixiyo iyo liiska bilaashka ah ee 'Yelp'? Wax fikrad ah kama lihid maxaa yeelay ma kala sooci kareysid beddelaadyada ka yimid xayeysiiska lacag bixinta iyo liiska bilaashka ah.
Yelp waa sida maafiyada oo kale. Anigu ma ihi milkiilaha ganacsiga yar yar ee dhalanteedka ah ee aan CPC ka aqoon xayeysiiska aragtida ku saleysan. Ereygeygii ugu horreeyay ee talobixin ah: Ha ku xayeysiin duruuf kasta oo ay leedahay Yelp. Iyagu waa tuugo (oo la mid ah shaydaanka dhab ahaan) kuwaas oo kaliya kaa doonaya inaad saxeexdo qadka dhibcaha si ay kuugu dabakhaan qandaraaskooda ka dibna ay u sii wadaan inay ku siiyaan adeeg aad u xun. Waxaan uga cawday wakiilada xayeysiinta ee Yelp in xayeysiintooda gujintu ay gebi ahaanba nuugto in kabadan hal munaasabad. Jawaabta aan helayay waxay ahayd isku mid markasta. Ganacsadaha yare e Yelp ee iibiya ayaa ii soo diraya tirooyin kooban oo ku saabsan sida boggeyga yelp uu u helayo X tirada aragtiyada, x tirada dadka gujinaya degelkeyga bogga yelp, x tirada muuqaalka mobilada, iyo lambarka X ee iibka Yelp. Waxay ku guuldareystaan ​​inay la xiriiraan in dhammaan tirooyinkani ay aad u yar yihiin inay ku sameeyaan xayeysiinta lacagta lagu bixiyo ee 'Yelp'. Intan badan waxay ka dhalatay liis garaynta bogga bilaashka ah ee 'Yelp'. Asal ahaan marka la soo koobo, haddii aan haysto 300 oo bilaash ah oo aragtida Yelp ah ee degelkeyga (Iyada oo ku saleysan lambarrada gorfaynta google ka hor xayeysiinta Yelp) ka dibna waxaan helayaa 40 guji marinno (maskaxda ku hay in kuwani ay qasab yihiin illaa boggeyga Yelp, oo aan lahayn dammaanad ka qaad macaamilka iman kara inuu i soo wici doono ama xitaa amar bixin doono), muxuu iibinta Yelp ugu celinayaa tirakoobyadaas sidii oo kale waxaan u helayaa kuwa ka dhasha xayeysiintayda lacag bixinta ah ??? Sababtoo ah inta badan macaamiishoodu waa macaamiil ganacsi oo yaryar oo aan xayeysiin u lahayn oo kaliya waxay isku dayaan inay ku jahwareeriyaan iyaga oo aaminsan in iyada oo aan la bixin xayeysiinta Yelp waxaas oo dhan ay tagi doonaan.
Dadkani waa fanaaniin fadeexad run ah. Haa, Yelp waa ilo wanaagsan oo ganacsi cusub ah taas oo ahayd sababta aan ugu diiwaangaliyay xayeysiinta lacag bixinta marka hore. Si kastaba ha noqotee, khadka ugu hooseeya ayaa ah in xirmooyinka xayeysiinta ay yihiin wadar gooyn oo kaliya faa iidada u leh Yelp, ee aan ahayn xayeysiistaha. Ma ogeyd? Yelp iibinta dadku kuma siin doonaan lambarka taleefankooda si aad ula xiriirto iyaga? Ma lihid hab aad ugu wacdid iyaga. Kaliya way ku soo wici karaan. Waad emayl u diri kartaa, laakiin ma laga yaabaa inay maalmo ka jawaabaan. Kadib markay ugu dambayntii soo wacayaan, oo aad seegto wicitaanka cuz waxaad tahay waad ogtahay socodsiin ganacsi yar, ma haysatid wado aad dib ugu soo wacdid. Tani way sii socon kartaa Sida muuqata dadkan iibka ahi aad bay mashquul u yihiin oo ma haystaan ​​wakhti ay kula hadlaan dadka qiil ka dhigaya kaalintooda, macaamiishooda.
Marka qandaraaskeyga xayeysiinta uu dhammaado, ma jirto waddo aan mar kale iyaga kula soo saxiixo. Wadarta khayaanada. Ku dhaji liistada bilaashka ah ee 'Yelp'. Waxay u shaqeysaa si kafiican xayeysiinta labixiyay iyo bilaashkeeda.
Waayahay Yelp maya bueno. Maxaad kula talinaysaa
Weli waxaan kugula talin lahaa inaad bog ku yeelato Yelp, Facebook iyo Google +… laakiin ma hubo inaan ku xayeysiin doono Yelp shuruudahooda awgood. Haddii aad adeeg bixiye ka tahay Liiska 'Angie's List', waxay ku leeyihiin dhagaystayaasha ugu qiimaha badan halkaas iyo hab cadaalad ah oo lagu dhexdhexaadiyo bixiyeyaasha iyo macaamiisha.
Miyaad inta badan ka fekereysaa inaad isticmaasho Yelp si aad u hesho macaamiil cusub ama aad ugu fududeyso macaamiishaada jira inay kuu soo galaan? Anigoo ah isticmaale Yelp, waxaan u adeegsadaa Yelp labadaba helitaan cusub iyo sidoo kale raadinta menusyada iyo lambarrada taleefannada meheradaha aan horay u aqaan ee aan aaday. In kastoo, waa inaan dhahaa weligey ma riixin xayeysiis markaan arko xayeysiis, waxaan u maleynayaa in haddii ay tahay inaad xayeysiiso Yelp markaa sheygaagu waa inuusan fiicneyn.
Nov 19, 2014 saacadu markay tahay 2:36 PM
Ma hubo inay taasi macquul tahay!
28, 2014 at 9: 09 PM
Nasiib darrose, xaaskeygu waxay u socodsiisay xayeysiin meheraddeeda timo qurxinta maxalliga ah. Yelp waxay sheegatay inay jiraan 100 guji oo xayaysiiskeeda ah labadii toddobaad ee ugu horreeyay. Waxaan dhahnay maya, xaaskeygu waxay leedahay taleefanka gacanta, meheradda oo hal wicitaan ma ahan! Waxay leedahay 5 xiddig oo Yelp ah oo leh saddex dib u eegis oo waaweyn sidee ugu heli kartaa eber wicitaanno dadka xiiseynaya inay si dhab ah u gujiyaan xayeysiinteeda?
Qaybta runta ureysa ayaa ah in Yelp ay nagu soo dallacday $ 3.50 guji kasta !,
Marnaba kama fileynin inaan helno wax ka badan sacabbada riixi ah (waxaan u maleyneynaa in tirada gujintu ay tahay Khayaano) iyo boqolkiiba hufan (10-30%) oo kuwa gujinaya inay soo wacaan.
Wicitaano ma jirin heshiis weyn oo xoogaa la filayay, laakiin maahan markii Yelp ay rabto inay naga dalbatid 100 guji.
Kooxda taageerada Yelp waxay soo jeediyeen inaan waxoogaa horumar ah ku sameyno bogga Yelp iyo sharaxaadda ganacsiga. Taasi waxba kama tareyso inay sharaxdo 0% heerka wicitaanka laga filayo 100 + qasabno.
Waxaan dooneynaa inaan ka baxno Yelp hadda, waxay noo sheegeen inay ahayd inaan baajinno 15-keedii bishii hore.
Soo-jeedin kasta oo ah sida nalooga saaro iyo sida ugu wanaagsan ee aan ereyga ugu gaarsiin karno milkiileyaasha kale ee ganacsiga yaryar si looga fogaado Yelp sida balaayada oo kale.
Febraayo 18, 2015 saacadu markay tahay 9: 42 AM
Haddii ay hayaan macluumaadka koontadaada hubinta oo ay si toos ah ula baxaan withdraw .Waan joojin lahaa koontada oo waxaan furayaa mid cusub. Markii ay kuugu hanjabaan talaabo sharci ah… xafid cadeynta diiwaanka taleefankaaga si aad u muujiso khayaanada. Taasi waa waxa aan sameyn lahaa. Dabcan waad ku waayi kartaa maxkamada or ama kaliya waad joojin kartaa oo waad ganaaxi kartaa. Waan necbahay Yelp. Hadaan nahay milkiileyaasha ganacsiga waxaan ubaahanahay inaan iska caabino.
Sep 21, 2015 at 1: 00 PM
Waxaan nahay shirkad hagaajisa biyaha iyo caaryada waxaanan ku xayeysiineynaa shirkadda Yelp. Ma ahan natiijooyin wanaagsan iyo qandaraas 1 sano ah. Intaas waxaa sii dheer, waxay ka saareen qaar ka mid ah dib u eegistayadii wanaagsanaa cudur daar intii ay noqon lahaayeen kuwa been abuur ah. Ha kugula talin inaad lacagtaada ku lumiso iyaga.
Nov 2, 2015 at 11: 15 AM
Tani waa macluumaad weyn. Dhibaato isku mid ah ayaan kala kulmay face book. Gabi ahaanba way iska indha tireen.
Feb 4, 2016 markay ahayd 12:13 PM
Aniguba ganacsi yar baan haystay, waxaan haystay qiimeyn shan xiddigle ah, wuxuu ahaa macmiil aan ushaqeeyo, isaguna ima uusan aqoonin ama xiriir nooc kasta ah oo ilasameeya oo aragtidiisa qalqal galin kara qiimeynta wareejinta.
Isaga ayaa iskiis u qaatay inuu i siiyo dib u eegis aad u wanaagsan. Wuxuu ku sheegay sababo cayiman oo fikirkiisa ah isla markaana aqoon u lahaa shaqada. Ma jirin wax ku jiray dib-u-eegista oo u muuqan doonta inayna ahayn wax aan ahayn ra'yi aan eex lahayn.
Ka dib markii iibka yelp uu isku dayay inuu igu iibiyo barnaamijka lacag bixinta, si edeb leh ayaan u diiday marar badan inta lagu jiray wicitaano badan oo iib ah.
Kadib markaan yaraaday xidigteydii shanaad waa lawaayay. Waxay hadda ku jirtay qaybta aan lagu talin. Isagu wuxuu ahaa dib-u-eegiddayda keliya. Waxaan la xiriiray yelp oo waxaan u sheegay kiiskeyga in ereyga "laguma talinayo" uu yahay mid si khaldan u hogaaminaya isla marka macaamiil macquul ah uu arko ereyga "laguma talin" waxay rumaysan doonaan inay tahay dib u eegis diidmo ah meheradana aan lagu talin oo ay ku sii socoto.
Kadib markaan cadeeyay kiiskeyga uma maleynaynin inay wax dhacayaan waan ku faraxsanahay inaan arko iyagoo dib u daabacay qiimaynta shanta xiddigood.
Ka dib wax yar ka dib markay isku dayeen inay i iibiyaan mar labaad barnaamij lacag leh, mar labaadna waan diiday. Markaa qiyaasa waxa, qiimeynteyda shanta xiddig mar kale hoos ayaa loo dhigay.
Muddadan waxaan weydiisan lahaa macaamiisha inay i eegaan. Qaarkood waxay umuuqdeen kuwo kalsooni ku qaba inay waqti qaadan doonaan si ay dib ugu eegaan. Ma jiraan dib u eegisyo kale oo weligay ku soo muuqday boggeyga. Waxaan aakhirkii gartay in dib u eegistu aysan ka dhigaynin bogga. Marka hadda macaamiisha uma sheegi doono yelp.
sawir samone sawir
Oh runtii? Waxaan la kulmay wicitaano cadaadis sare ah shalay. Way isoo waceen si isdaba joog ah ilaa aan ka ogolaaday 3 bilood oo aan haysto $ 325 - Waxaan ka walwalsanahay waxa laga yaabo inaan hadda saxeexay.
Rock adag Web Dev
Waxaan ka fekerayay inaan iyaga la xayaysiiyo, laakiin wakiilkooda ayaa maalin kasta i soo wacaya maalin kasta bilo taas oo aan u arkay wax aan caadi aheyn oo aad u riix badan.
Aniguba anigaaba igu dhacay!
Ha yeelin, sida dadka kale u yiraahdeen, Xayeysiiso Yelp!
Waxay yiraahdaan wax kasta si ay kuu helaan inaad saxiixdo markaa waligaa wax jawaab ah kama heli doontid!
Waxay sidoo kale kaa horjoogsanayaan inaad wax ka beddesho liiskaaga bilaashka ah ee 'Yelp'!
Waxay ku soo oogeen akoonkeyga ogolaansho la'aan kadib markii ay dhowr jeer ii xaqiijiyeen inaysan rabin!
Waxaan ka helay wicitaano badan dadka iibiya kuwaas oo sheegay inay arkeen inaan ku xayaysiinayo Yelp oo aan doonayo inaan arko haddii aan isku dayi doono inaan xayeysiin la sameeyo shirkadooda, ama aan u isticmaalo shirkadooda SEO ..
Tani waxay cadeyneysaa in Yelp aysan kormeerin qasabadaha isla markaana hubiso waxaan kaliya oo bixiyaa dadka raadinaya ee xiiseynaya adeegsiga adeeggeyga sida ay sheegteen! !!
Wadarta shirkadda b / s!
Marnaba ma helin inaan oggolaado xayeysiintayda ka hor intaanay daabicin
Waxay ku hayaan sawirro nasiib ah halkii ay astaantaydu noqon lahayd
weligood iiguma soo dirin biil aan ku bixiyo 30 maalmood gudahood, waxay ku soo oogeen maalintaydii bangiga 1 !!!!
(wax walboo ay ka been sheegeen)
.. Waxaan la hadlay maamule, wuxuu igu yidhi "gabi ahaanba, waanu heli doonaa isbadaladan lagu sameeyo koontadaada" (5 arrimood oo khaldamay, oo ay kujirto aaggayga adeega) "waxaan rabnaa inaad ku faraxsanaato adeega aad helayso ”
..waxaa qodob ah oo aan waydiiyay isbadalada uu sameyn doono (kahor inta uusan taleefanka ka dagin, wuxuu rabay inuu hubiyo inuu fahansan yahay) Ma magacaabi karo HAL KELIYA oo ah wixii aan ka wada hadalnay!
xitaa ma dhageysaneyn! Waxaan moodayay inaan maqlay asaga oo gadaal kahadlaya (maxaan u waydiiyay inuu alaabta igu soo celiyo)
Orod! ninkani waa "Visor Stupid"
waa ninka tababaraya jinniyadan Farshaxannimada ah!
HA ku xayeysiin shirkadan hadhka leh!
Waxay iga jareen $ 375 waxaanan kaliya helay 16 wicitaan oo iib ah oo ku saabsan degelkeyga, ma ahan hal wicitaan hal macaamil oo macquul ah! sidoo kale tartamayaasha lama kormeero waxayna u badan tahay inay gujinayaan xayeysiiskaaga!
Haatan waa la iga wada saaray shantii dib u eegis ee xiddiggayga ah MAHADSANID CAAWIMAAD!
Waad ku mahadsantahay talooyinka - Waxaan ka fiirsanayay yelp xayeysiinta la bixiyay. Muddo intee le'eg ayaad ku bixisay xayeysiinta? Ma weydiin karaa, intee in le'eg ayaad maal gashatay sidoo kale?
Ganacsigeennu sidoo kale wuxuu lahaa dib u eegisyo kala duwan oo ay ku jiraan mid ilaa shan xiddigood oo dib loo eegay. Mid ka mid ah dib u eegista xiddigga waxaa si cad u qoray qof aan dheellitirnayn oo qaylinaya oo aan runtii soo booqan meheraddeenna seddax iyo saddexna shanna ay ka yimaadeen macaamiisha dhabta ah.
Si xushmad leh ayaan udiiday yelp wicitaanada xayeysiiska (inbadan dhowr usbuucyo), afarta iyo shanta faallooyinka xidigaha waa qarsoonaayeen, kaliya waxaan ka tagayaa hal xidig oo dib u eegis ah. Waxay ku andacoodaan inay ka qaadaan dib u eegista aan sharciga ahayn, hase yeeshe in hal xiddig dib u eegis lagu siiyay qiimeeyaha kaliya isla dib u eegistaas, halka mid ka mid ah shanta uu ka yimid dib u eegis leh dib u eegisyo badan oo ku saabsan astaantooda.
Iyagu waa beenaalayaal iyo tuugo yelp. Marnaba ma siin doono iyaga boqol, waligoodna uma isticmaali doono macaamiil si aan u raadsado dukaamada maxalliga ah sidoo kale. Waxaan ku codeynayaa awooddeyda macaamiisha - fadlan waligaa ha isticmaalin goobtaas! Markasta oo ay dadku ka fogaadaan booqashadeeda, ayaa yaraanaya aragtida ay heli doonaan, waxaana rajeynayaa inay ka bixi doonaan ganacsiga.
Markaa waan eegay oo hal xiddig ayaa dhab ahaa. Taasi waa caadi, waxaan ku jirnaa warshad hal xiddig ay caadi ka yihiin. inkasta oo hal xidig dib loo eegay uu ahaa mid xalaal ah, hadana wali waxaa layaableh in yelp kaliya dooratay midkaas in la ilaaliyo, iyadoo laga takhalusaayo dib u eegista sare kadib markii aan ku dhahnay "maya" xayeysiimaha lacagta la siiyay Yelp yuck.
Khibrad aan la rumaysan karin oo ku saabsan xayeysiisyada yelp, waligaa ha u malayn sumad weyn tan weyn inay noqonayso khiyaano guud. Waxay kugu xirayaan qandaraas hal sano ah, sida inbadan oo halkan lagu sharaxay, iska iloobaan sida xayeysiintu u socoto ama la socosho markay kugu raacaan.
Xeelado iib ah oo aad u hadh badan, ballamo been ah, wax ka badan khiyaano mooyee!
Tiknoolajiyaddooda PPC sidoo kale waa mid aad u shaki badan, waxay heleen wicitaanno ku saabsan adeegyo aan la xiriirin iyo tirakoobyada ay haysteen waxay ahaayeen kuwo gebi ahaanba khaldan.
Markii wax laga waydiiyo sababta wicitaanadu ula xiriiraan ganacsiga, waxay sheegaan in ganacsigu ku jiro qayb gaar ah booqdaha ku habboon qaybtaasna wuxuu arki doonaa xayeysiiska, taas oo cadeyneysa inay kaliya doonayaan qasabno iyo taxaddar la'aan inay u soo bandhigaan xayeysiinta macmiilka dhab ahaan raadinaya adeeggaaga.
Aad u daacad daran, ha u dhicin dabinka, ka fogow!
Waan ku raacsanahay, si isku mid ah ayey igu sameysay, waxaan qaatay dhammaan shanteyda xiddigood maxaa yeelay ma aanan dooneynin inaan la saxiixdo, maxaan sameynaa? Tani waa khayaano.
Wadarta qashinka waxaan kucelcelinayaa in qof kastaa uu hadalka u dhigo in dadkani aysan wax fikrad ah ka heynin waxa ay sameynayaan marka lagu daro waxaan u maleynayaa inay leeyihiin shaqaale riix xayeysiisyada si ay u adeegsadaan doollarka xayeysiinta. Liiska Craigs wuxuu i helay 100 jeer jawaabta intee in leeg? Sug ma?… .Waxba ma jiraan sababa xayeysiiska Craigs List waa bilaash. Dadkani waa tuugo cad oo fudud.
Waxaan kala kulmay khibrad aad u xun xayeysiinta yelp. Way qaali yihiin. Waxaad ku xiran tahay qandaraas ay tahay inaad bixiso wax badan si aad goor hore u joojiso. Wax natiijo fiican ah kama helin xayaysiiskan. Fadlan ha sameyn qaladkii aan sameeyay oo kale. Ku bixi doollar xayeysiintaada meelo kale.
Runtii waan u tegey midkan. Xanuun Xanuun badan…. oo waxaan ahay xirfadle PR / Suuq geyn. Aad ayaan u qanacsanahay dareenka Elaine. Qiyaasta "guji halkii xayeysiis" waa wax yar oo mugdi kujiro sida ugu fiican - iyadoo iibiyaha iibiya uu ii sheegayo inay qiyaastii noqonayso $ 5 - $ 10 iyadoo kuxiran tartamayaasha (peep badan w / isla biz ayaa kor u qaadaya) markay runti ahayd $ 18 / guji . In ka badan 3 bilood ma jirin HAL beddelid. Qalabkooda algorithms waxay u baahan yihiin isbeddel dhab ah - Yelp ayaa soo bandhigi doonta xayeysiiskayaga markii dadka ay raadinayaan adeegyo aan la xiriirin. Layaab malahan inay nuugtay…. yaa raba xayeysiin la yiraahdo “rootiga” markay baaraan “bar”.
Haddii aan wada heli karo waxaan dhab ahaan u dacweyn karaa khiyaano…. waa wax xun.
Waxaan iska diiwaan galiyay yelp xulashada kaliya ee ay i siiyeenna waxay ahayd qandaraaska 1 sano ah. 6 bilood ka dib, waan ka daalay bixinta $ 375 khidmadda bishii ah inkasta oo aanan ka helin macmiil cusub. Marka waxaan isku dayay inaan baajiyo bil. Waxay yiraahdeen waa inaan siiyaa ogeysiis 30 maalmood ah oo aan bixiyaa $ 700 khidmadda joojinta hore. Ma jiraa qof og waxa dhici doona haddii aan diido bixinta?
Jun 30, 2016 saacadu markay ahayd 3:30 AM
Waxaan ahay milkiile ganacsi oo yar. Waxaan dhawaan joojiyay qandaraaskeyga oo sidoo kale ah. Kaliya maahan waxqabadka liita ee lacagta aan bixinay, laakiin waxay si xad dhaaf ah u awood siiyaan macaamilka. Macaamilku wali lama aqoonsan, wuxuu qoraa faallooyin diidmo ah oo ku saabsan meheraddaada, iyada oo aan caddayn loo hayn. Taasi waxay u oggolaaneysaa kuwa kula tartamaya inay si qarsoodi ah u qoraan faallooyin been abuur ah / xumaan ah, oo ay u baabi'iyaan magacaaga ganacsi. Marka Yelp waxay dooneysaa inaan ku bixiyo $ 540 bishii taas! Xitaa waxaan lahaa macaamil na siiya dib u eegis xiddig 1 ah, si fudud sababtoo ah waan isdiiwaan galnay, mana aanan haysan farsamo uu isaga u heli karo waqtigaas (10:30 pm). Annagu wax shaqo ah oo aan u qabannay ma jirin, annaga oo edeb leh, ayaannu hore u ahaan jirnay oo aannu daacad ahayn. Laakiin waxaan helnay dib u eegis 1 xiddig ah maxaa yeelay waxaan mashquulsan nahay! Yelp way diiday inay ka saarto.
Jul 5, 2016 markay ahayd 8:22 AM
Waxaad iskood ugu adeegi kartaa xayeysiinta barta Yelp jadwal kasta oo aad jeceshahay. Kaliya waa haddii aad qandaraas la gasho Yelp in ballanqaadka sanadlaha ah uu dhexgalo.
Soo gal Biz.yelp.com adigoo ah milkiilaha ganacsiga waxaadna daari kartaa xayeysiinta qaddar kasta ama waqti kasta. Mahelaysid fiidiyaha laakiin waad tijaabin kartaa xayeysiiska. Waxaan u isticmaalnaa iyaga macaamiisha.
Jul 25, 2016 markay ahayd 9:20 AM
Michelle - Waad ku mahadsan tahay dhajinta. Ma awoodaa inaad i siiso aragti qoto dheer / faham xayeysiis iskiis u adeegsi ah oo ku saabsan “qandaraasyada ballansashada”?
Sep 27, 2016 at 2: 29 PM
Go'aankeygii ugu fiicnaa, waxaan la saxiixday Yelp olole xayeysiis ah oo soconaya ugu yaraan seddex bilood, xayeysiiska ugu badan wuxuu qaataa $ 1,000 bishii, oo leh $ 700 lacagtii joojinta hore. Ganacsigeygu waa sharciga musalafnimada. Anigu waxaan ahay qareen kacsanaan / qareen, ma sameeyo nooc kale oo sharci ah, Yelp-na taas way ogayd. Waxyar kadib markaan ogaaday inay wadeen xayeysiintayda (taas oo aan ku bixinayay qasabadaha) raadinta "sharciga kireystaha" iyo "sawirka sawirka tooska ah". Anigu tan ma soo saarayo!
Sababtaas darteed adeegga xayeysiiska oo aad u cilladaysan, ayaan ogeysiiyay Yelp oo aan kansal gareeyay adeegga. Way sii socdeen oo waxay igu soo dacweeyeen qasabno xayeysiis ah labada bilood ee hadhay ($ 575 iyo $ 1,000) iyo waliba $ 700 oo ah lacagtii la kansalka.
Waxaan ku murmay dhammaan seddexda eedeymo shirkadda kaararka deynta. Lacagta # 1 ($ 575) ayaa si buuxda loogu xalliyey aniga. Lacagta # 2 ($ 1,000) ayaa wali socota. Lacagta # 3 ($ 700 ee khidmadda joojinta ah) waxaa lagu go'aamiyey in Yelp loo roonaado maxaa yeelay "qandaraaska ayey ku jirtay"! Miyaan qaadan doonaa wakhti iyo dhibaato si aan ugu dacweeyo iyaga? Shaki
Oktoobar 25, 2016 at 8:40 PM
Yelp waa shirkad aad uxun oo aan waligay lashaqeeyay. Guji-guji dillaac dhammaystiran. Waxaan u arkay inay yihiin kuwa khiyaano leh waana inaan shaqeeyaa si aan u ogaado khidmadaha baajinta. Mahadsanid waxaan heystaa oo kaliya seddex bilood qandaraas. Waxaan la shaqeeyaa shirkado badan oo khadka tooska ah ka shaqeeya oo iyagu ma ahan kuwo hagaagsan, laakiin Yelp waa tan kaliya ee aanan aaminin.
Nov 3, 2016 at 12: 31 AM
Waxaan hayaa hal nin (aniga) dayactirka dabka biz, wakiilka Yelp wuxuu ahaa mid aad u fiican oo aad ugu adkaysta isku dayga inuu igu helo inaan isqorto. Waan usheegay markasta oo aan kahadalno waxa aan raadinayay. Haddii dadku raadsadaan “dayactirka dabka iyo magaalada” waxaan arkaa in yelp ay leedahay “Dayactirka dabka gaaska ee ugu fiican Renton, WA - Yelp” oo had iyo jeer wuxuu ku yaal bogga koowaad. Waxaan ku idhi hadaan lacag ku siiyo miyaan ku qori doonaa bogga koowaad mar hadii ay gujiyaan goobta Yelp, waxaa la ii sheegay inaan sameyn doono. Raadin ma sameysay xalay, waxaan riixay Yelp, markii aan gaaray bogga 9aad halkaas ayaan joogay, 80+ ganacsi kadib, xitaa waxaan ka daba yimid nin wata Bizkiisa oo la yiraahdo Honey-do Handyman, waan hubaa inuu nin weyn yahay laakiin runti? Waxaan ku takhasusay dayactirka dabka gacmeedkuna wuu igu garaacayaa natiijooyinka? Waxaa la iigu yeeray inaan baajiyo oo aan helo isla sheeko sida dadyowga kale ee aan ka akhriyay boggan, waa hubaal inaan jeclaan lahaa inaan sidan hore u akhriyo. Kaliya waan joojiyay kaarkayga amaahda sidaa darteed waxaan rajeynayaa inaan ka fogaado 2 bisha BS ee aan waligeed la xusin markii aan saxiixayo, oo waxaan idhi waxaan siin doonaa dhowr bilood oo bal eeg haddii aan doonayo inaan sii wado. Ma jirto waddo aan kula saxiixan lahaa qandaraas, ma ku sii caddayn lahaa taas in ka badan oo ku saabsan wakiilka iibka. Si fiican ayaan u ogaa laakiin si kastaba waa la iibiyey. Marlabaad waan ilaaway inaan ku kalsoonaado xiidmahayga, aan wajahno, shirkad qiimaynaysa "bilaa biast" (sp) oo ka barya shirkada inay ku darto dollar, HELLO !!!!!!!! Xun …….
29, 2016 at 2: 00 PM
Waan ku faraxsanahay inaan arko doodan, kaliya waxaan jeclaan lahaa inaan fiiriyo KA HOR inta aan la saxiixin barnaamijka Yelp Ad. Waxaan aaminsanahay inay tani tahay khiyaano guud. Ka dib bishii ugu horreysay waxaa la i siiyay falanqeyntooda iyo biilka oo ay ka muuqdeen daraasiin wicitaanno taleefan ah waan ogahay inaan waligeen la helin: Waxaan si taxaddar leh u raacay diiwaanadeena aqoonsiga iyo 75% wicitaanada ay yiraahdeen waan helnay ma dhicin (taariikhda / waqtiga / taleefanka) tirada ma aysan diiwaangashan) iyo in badan oo dhahay jawaab ma jirto, suura gal maahan. Waxaan aragnay kor u kac weyn oo ku yimid wicitaanada weydiisashada qashinka qaar badan oo ka mid ahna waxay la mid noqdeen diiwaankeena wicitaankeena. Sababtaas awgeed gabi ahaanba kuma rumaysanno tiradooda boqolaal guji oo aan u malaynay inaan ku dhex marnay liisaska xayeysiiska. Waxaannu ka helnay taleefannada EBER dadka ka imanaya iyaga oo leh waxay arkeen Yelp Ad iyo amarrada macaamiisha ee ZERO. Sababtoo ah siyaasaddooda baajinta waxaan ku dhammeynay inaanu kala baxno ku dhowaad $ 1400 si aan uga baxno khiyaanada. Habka ugu fudud ee lagu eegi karo tan ayaa ah inaysan bixin karin wax caddeyn ah oo ku saabsan qasabadaha ay yiraahdeen waxay u abuureen meheraddaada, taas oo ah waxa ay salka ku hayaan biilka. Ka digtoonow, iska jir, iska jir, waxaan gabi ahaanba kugula talin lahayn Yelp Ads-ka qof walba.
Jan 25, 2017 saacadu markay ahayd 12:35 PM
Wax soo saarka xayeysiinta ee ugu xumaa abid! Ku bixiyay in ka badan $ 2000 mana helin hal hogaamin. Kadib waa la joojiyay waxaana laga qaaday $ 700. Uma talin doono qofna, wakhti kasta. Ripoff buuxa Weydiistay in aan qof kala hadlo arintaas waligeyna kuma soo celin wicitaanadayda ama emaylkeyga.
Ha xanaaqin, aargooso
Qodobka koowaad ee soo jiidashada ganacsiga ee YELP ma ahan xayeysiis. Waa dib u eegis.
Taasi waa sababta aan u soo saarnay kor u qaadista dib-u-eegista "Y" - taas oo ka dhigaysa mid deg deg ah dadka inay kaaga tagaan faallooyinka - Dhammaan qayb yar oo ka mid ah kharashka hal bil oo xayeysiis ah, hel qiime sanad ah oo dib u eegis ah. Ku darsiga dib u eegista ah ayaa waligeed sii jiraya Kala xiriir 5StarMarketingSoftware habka ugu wanaagsan ee ganacsi looga dhisi karo shirkadda Yelp.
Waxaan iska diiwaangeliyay tijaabada bilaashka ah ee yelp, waa la joojiyay hal toddobaad ka dib tan iyo markii aanan helin hoggaamiyeyaal u qalma, waxayna iga qaateen kaarkayga $ 450 2 bilood ka dib, iyagoo leh weligay ma joojin. Waxay dhaheen waa inaan kahelaa emayl tirtir iyaga hadii aan joojiyo, taas oo tan iyo markii aanan helin ay tahay arin ku saabsan nidaamkooda. Waxaan la hadlay waaxdooda biilasha, oo ii sheegay in aysan xisaabtankayga soo celin doonin oo ay maanta kansali karaan… Tani waxay umuuqatay mid aad loo xisaabiyay. Waxaan isla markiiba wacay shirkaddayda kaararka debit-ka oo aan ka dooday dacwadda. Markii aan dib u wacay si aan ula hadlo maareeye, iima jawaabin maxaa yeelay waxay yiraahdeen waa bisha ugu horreysa waxaana ku cuslaaday arrimo biilal ah. Waan qiyaasi karaa! Ma helin hal qaan-sheegasho, emayl ama ogeysiis ah in la i soo dallacayo inta lagu jiro wakhtigan, si fudud ayey u socodsiiyaan kaarkayga. Google iyo Facebook waxay had iyo goor kuu soo diraan cusbooneysiin adiga oo xayeysiinaya. Yelp waxay umuuqataa inaysan sifiican usoconin, tanina waa isku day fashilmay oo lagu aruurinayo dakhliga macaamiisha qarashka. Kuma faraxsana maqnaanshahooda xaalada, iyo adeega macaamiishooda. HA ISUGU SIIX GELIN TIJAABADA CAAWIMADA BILAASH AH! WAA QIYAAMO